Sunday March 22, 2020 - 11:32:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo dhulka Soomaaligalbeed ee gummeysiga kujira kumanaan askari Xabashi Itoobiyaan ah ayaa kasoo gudbay xuduud beenaadka waxayna usoo jihaysteen dhanka soomaaliya.
Ciidamadan oo wata gaadiidka Uuraallada loo yaqaan ayaa socdaalkoodu wuxuu yimid laba maalin kadib markii Xasan Cali Kheyre uu booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa, warar laysla dhaxmarayo ayaa sheegaya in hoggaanka dowladda Federaalka uu Itoobiya weydiistay ciidamo dheeraad ah si ay dhul hor leh ugu qabtaan.
Dad ku sugan degmada Dooloow ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo kasoo tallaabay xuduud beenaadka ay lawareegeen gacan ku heynta garoonka diyaaradaha Dooloow halka ciidamo kale ay ujiheysteen dhanka degmada Luuq ee isla gobolka Gedo.
Magaalada Jigjiga ayay shalay kasoo gudbeen boqolaal gaadiid ah oo ay la socdaan ciidamo Xabashida Itoobiyaan ah waxaana la sheegay in ciidamadaas ay ugudbeen dhanka gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanaddii 2018 dowladda Itoobiya usaxiixay heshiis dhigaya in ay la wareegto Afar dekadood oo kuyaal dalka Soomaaliya walina waxaa socda xusulduubkii ay Itoobiya ku doonaysay dhaqan gelinta heshiiskaasi.
Aqoonyahan Cali Xirsi oo ku sugan dalka dibaddiis ayaa sheegay in ciidamada gummeysiga Itoobiya ay yihiin kuwa dhulboob ah ayna ku socdaan dalab ka yimid Farmaajo iyo Kheyre.
Wuxuu sheegay in mas'uuliyiin katirsan DF-ka ay Jawaasiis u yihiin Kenya iyo Itoobiya ujeedkooduna yahay sidii Soomaaliya ay unoqon laheyd dal daciif ah oo aan halis gelin karin ammaanka labadan dowladeed ee cadaawadda soo jireenka ah uqaba shacabka soomaaliyeed.
Halkan ka degso aqoonyahan ka hadlay qulqulka ciidanka Itoobiya MP3